Ireo mpizahatany any Korea Atsimo handeha ho any Thailandy eo ambanin'ny quarantine golf
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana ara-panatanjahantena » Ireo mpizahatany any Korea Atsimo handeha ho any Thailandy eo ambanin'ny quarantine golf
Raha toa mahafinaritra anao ny fandaniana karantina amin'ny golf, dia mety te handinika ny fitsangatsanganana any Thailand ianao izay misy programa quarantine golf napetraka.
Ny fitsangatsanganana dia hojerena mivantana ary harahi-maso mba hisian'ny fiarovana ara-pahasalamana.
Ireo mpizahatany quarantine golf dia handany karzanina 14 andro amin'ny lalao golf voamarina.
Ny fitsangatsanganana dia ahitana golf golf eo amin'ilay taranja.
Ireo mpizahatany any Korea atsimo izay te-hitsidika an'i Thailand dia tsy maintsy manakarama tena fa afaka manao izany amin'ny lalao golf. Ny manampahefana misahana ny fizahan-tany any Thailand (TAT) dia mamela ny quarantine golf ho an'ireo mpizahatany iraisam-pirenena izay tsy maniry hijanona ao amin'ny efitrano na faritra iray mandritra ny andro maromaro.
“Niara-niasa tamin'ny masoivoho mpizahatany Arirang izay manampahaizana manokana amin'ny fizahan-tany golf any Korea Atsimo i TAT handray ny vondrona mpizahatany golf any Thailandy voalohany. Koreana tatsimo maro no nahita fa tena mahaliana sy nangataka izany ny quarantine golf, "Hoy izy Fahefan'ny fizahantany any Thailand (TAT) Tale lefitra Jiranee Poonnayaom.
Androany hariva, nanjary zava-misy io asa io raha ny vondrona voalohany misy mpizahatany Koreana Tatsimo 41 dia kasaina ho tonga any Thailandy amin'ny 19 febroary ho avy izao amin'ny fampielezan-kevitra quarantine golf, nomen'ny TAT fahefana. Hiainga mivantana amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Incheon amin'ny 7:05 hariva (ora eo an-toerana) amin'ny alàlan'ny Korean Air izy ireo ary hiakatra amin'ny seranam-piaramanidina Suvarnabhumi any Thailand amin'ny 11:20 PM hoy ny Tale lefitra.
Ny mpilalao golf rehetra tonga dia mikasa ny hijanona mandritra ny 2 volana farafaharatsiny. Handany ny quarantine 14 andro voalohany azy ireo ao amin'ny Athitaya Golf Course any Nakhon Nayok Province alohan'ny handehanana any amin'ny golf hafa any Chiang Mai.
Ny Lehiben'ny Fizahan-tany any Thailand dia nanombatombana fa mandritra ny 2 volana hijanonany, Thailand dia hanana fidiram-bola be avy amin'ny vondron'ireo mpizahatany ary raha mahomby dia hisy vondrona maromaro ho avy atsy ho atsy.
Thailand dia mamela ny vahiny hiditra an-tsambo amin'ny alàlan'ny programa Visa Exemption. Afaka mivezivezy ny mpitsidika nefa tsy mahazo visa ary afaka maharitra 45 andro. Mila taratasy fanamarinana ireo mpandeha mba hampisehoana fa afaka COVID-19 72 ora alohan'ny dia izy ireo, ary tsy maintsy mahazo taratasy fanamarinana ny fidirana (COE), manome fiantohana ara-pahasalamana mandrakotra ny COVID-19, ary hiharan'ny quarantine voatery.
Ireo mpizahan-tany quarantine golf dia handany 14 andro amin'ny quarantine amin'ny golf efa voamarina. Fitsapana PCR haingana dia hotontosaina amin'ny andro ahatongavan'ny andro ka ny valiny dia horaisina ao anatin'ny 24 ora. Raha mampiseho valiny ratsy ny fitsapana dia afaka milalao golf ny golf amin'ny andro manaraka. Raha tsara ny vokatra dia tsy maintsy hafindra any amin'ny hopitaly nanaovana fifanarahana ilay mpilalao golf mahafaty ary ny mpikambana rehetra ao amin'ilay vondrona dia tokony harahi-maso. Hosedraina in-3 eo ho eo ireo mpilalao golf mandritra ny vanim-potoana quarantine, mandritra izany fotoana izany dia afaka mankafy hatramin'ny golf golf 14 (lavaka 18 / boribory) izy ireo.
Ho an'ireo liana amin'ny quarantine golf, ny olona iray dia afaka mangataka sy manontany momba ny antsipiriany miaraka amin'ny masoivohon'izy ireo na consulat, izay mahatadidy fa ireo firenena atahorana mafy dia mety tsy mendrika.
Maty ny Maherifo momba ny fizahantany Indoneziana: ny minisitra teo aloha I Gede Ardika
NASA's Perseverance rover dia mandefa fitsikilovana ny fipetrahana any Mars